खालि समयमा पढ्नुका बिबिध फाइदा : तनाव घटाउँछ, मस्तिष्क शक्ति बढाउँछ
प्रविधिमय आजको यो युगमा धेरैले त्यसको फाइदा लिएका छन् भने कतिले त्यसमा समय बर्बाद गरेको बताइन्छ । तर सामाजिक सञ्जालहरुमा समय खेरफाल्नु भन्दा धेरैजसो शोधले पढ्नु मनोवैज्ञानिक र संज्ञानात्मक हिसाबले निकै उपयोगी हुने देखाएको छ । विद्वानहरूले पढ्नुका विविध फाइदा देखाएका छन् ।
हेर्नुहोस्, पढ्नुका विविध फाइदा :
१. तीक्ष्णता बढाउँछः बालकथाकार डा. सेउसले लेखेका छन्, ‘तपाईं जति पढ्नु हुन्छ, त्यति बढी कुरा थाहा पाउनुहुन्छ । जति बढी सिक्नुहुन्छ, त्यति ठाउँ घुम्नु हुन्छ ।’ एउटा असल पुस्तकले ज्ञानको खानी खोलिदिन्छ र त्यो खानी तपाईंले अन्त कतै पाउनु हुन्न । किताब पढेर बालबालिकाले जति शब्द सिक्छन्, टेलिभिजनबाट नसिक्ने केहीको दाबी छ । ५० प्रतिशत बढी शब्द किताबले नै दिन्छ । साना बेलामा जति बढी पढ्यो, त्यो पढाइ पछि निकै काम लाग्ने अध्ययनले देखाएको छ ।
२. मस्तिष्क शक्ति बढाउँछः नियमित पठनले व्यक्तिलाई तीक्ष्ण, सचेत बनाउँछ साथै मस्तिष्कको शक्तिसमेत बढाइरहेको हुन्छ । हिँड्दा जसरी तपाईंको कार्डियोभास्कुलर प्रणालीले नियमित काम पाई शरीर तन्दुरुस्त पार्छ, पढ्ने क्रममा आएका शब्द तपाईंको दिमागमा घुमिरहँदा मस्तिष्कले काम गर्ने अवसर पाउँछ । जति बढी काम पायो, मस्तिष्क उति सक्रिय हुन्छ र जुन अङ्ग सक्रिय भयो, त्यसले दिने परिणाम पनि उति नै राम्रो हुन्छ । एउटा अध्ययनअनुसार, साहित्य पठनले अन्य व्यक्तिबारेको बुझाइ बढाउँछ । त्यस्तै यसले अघिल्तिर व्यक्तिको अनुहारको हाउभाउ पढ्न सक्ने पनि बनाउँछ ।
३. ध्यान केन्द्रित गर्न सघाउ पुर्याउँछः छोटा ब्लग र समाचार पढ्ने धैर्य र पूरै किताब पढ्ने धैर्यबीच फरक छ । किताब पढ्नेहरुमा बढी धीरता हुन्छ । धीरता बढी हुने व्यक्तिको आफ्नो सोचलाई केन्द्रिकृत गर्न सक्छ । किताब पढ्न बाहिरी संसारबाट पूरै विच्छेद भई बस्नुपर्ने हुन्छ । यो विच्छेदले तपाईंभित्रको सचेतता बढाउँछ ।
४. सिर्जनशीलता बढाउँछः किताब पढ्दा तपाईंले त्यसका पात्र, हाउभाउ, पृष्ठभूमि, तिनका महत्वाकांक्षा, इतिहास र कैयौँ साना कुराहरु याद आउँछ । किताबमा गाँसिएका स–साना उपकथा पनि सम्झनु हुन्छ । मोटा किताब पढ्नुका फाइदा के हुन्छ भने आवश्यक परेका बेला ती उपकथा स्वाट्ट अन्य प्रसङ्गमा जोडिएर आउँछन् । ती प्रसङ्गले तपाईंको सिर्जनशीलता बढाउन सहयोग पुर्याउँछन् ।
५. तनाव घटाउँछः किताब पढ्नुको फाइदा यो पनि एउटा हो । युनिभर्सिटी अफ ससेक्सले गरेको एउटा अध्ययनअनुसार पढ्दै नपढ्ने व्यक्तिको तुलनामा दिनमा कम्तिमा पनि ६ मिनेट पढ्ने बानी भएका मानिसहरुको तनाव सहज बनाउने, मांशपेसीको दबाब खुकुलिने गर्छ । पढ्ने मानिसको तनावको तह स्वाट्टै तल झर्ने गर्छ । काम वा पारिवारिक झन्झटको जतिसुकै बढी तनाव होस्, पढ्न बसेपछि त्यो तनावको स्तर घट्छ ।
६. मज्जाको निद्रा लाग्छः अमेरिकाको माया क्लिनिकले गरेको एउटा अध्ययनअनुसार निद्रा कम लाग्ने वा नलाग्ने मानिसलाई किताब थमाइदियो भने स्वाभाविक निद्रा लगाउन सहयोग गर्छ । सुत्नुअघि टेलिभिजन हेर्नुभन्दा किताब पढ्नुले राम्रो निद्रा लगाउने पनि माया क्लिनिकले गरेको अध्ययनले देखाएको छ । अमेरिका र युरोपजस्ता विकसित मुलुकमा भने किताबको साटो इलेक्ट्रोनिक सामग्रीहरु इबुक वा ट्याब्लेटमा पढ्ने बानी विकसित हुन थालेकामा भने चिन्ता गर्न थालिएको छ । तिनले निद्रा चोर्न थालेको चिकित्सकहरुको निष्कर्ष छ ।
७. लेखन शक्ति बढाउँछः जसले बढी पढ्छ, उसको शब्दसामथ्र्य बढी हुन्छ । जसको शब्दसामथ्र्य राम्रो हुन्छ, उसले लेखेको बढी बुझिने हुन्छ । अर्कोतर्फ बढी पढ्ने व्यक्तिमा अन्य राम्रा लेखकको प्रभाव नजानिदो किसिमले घुसेको हुन्छ । त्यो राम्रो प्रभावका कारण त्यस्ता व्यक्तिका लेखनीमा स्पष्ट झल्किन्छ । समयक्रममा लेखनीमा परिष्कार हुँदै एउटा भिन्दै शैली बन्ने हुनाले बढी पढ्ने व्यक्तिका कुरा बढी पढिने पनि हुन्छ ।
नेपाली फुटबल खेलाडीको स्तर खस्किएको थ्रीस्टारका प्रशिक्षक केसीको विश्लेषण